» महिला सहयात्रा लघुवित्तको मुनाफा ८५५% ले बढ्यो, अन्य सूचांक कस्तो ?
०८ माघ २०७८
महिला सहयात्रा लघुवित्तको मुनाफा ८५५% ले बढ्यो, अन्य सूचांक कस्तो ?
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:५४
काठमाडौं । मकवानपुरको चित्लाङ केन्द्रीय कार्यालय रहेको महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुनाफा ८५५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा महिला सहयात्रा लघुवित्तको खुद नाफा ८५४.९१% ले बढेर चार करोड ३९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा कम्पनीले ४६ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा कमाएकोमा चालु आवमा खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा वृद्धि भएसँगै खुद नाफा उच्च अंकले बढेको छ ।
कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ६३.७२% ले बढेर १० करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यसैअवधिमा यसले छ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष ६५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा रहेको कम्पनीले यो वर्ष छ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक विवरण अनुसार महिला सहयात्राको प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक ४४ रुपैयाँ ०२ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १५७ रुपैयाँ ९६ पैसा छ । चुक्ता पुँजी १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको सो कम्पनीले जगेडा कोषमा ७ करोड ६० लाख ७९ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
आउँदो सोमबारदेखि सरकारले भिजिट भिसामा जान रोक
सिटिजन लाइफद्धारा मृत्यु बीमा दाबी भुक्तानी
छिमेक लघुवित्तका नव नियुक्त अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीद्धारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण
रिलायन्स लाइफको सिईओमा राकेश पोखरेल नियुक्त, बीमा समितिबाट स्वीकृत
पछिल्लो २४ घण्टामा साढे १० हजार जना संक्रमित थपिए, उपत्यकामा मात्रै ५ हजार माथि
बैंक तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई जोर विजोर लागु नहुने,के छ नयाँ आदेशमा ?
महिला उद्यमशीलता विकाशका लागी नबिल बैंक, सीएनआई–वुमन लिडरसीप फोरम र महिला शक्ति विकाश केन्द्र नेपालका बीचको सहकार्य
यातायात व्यवसायीद्धारा जोर विजोर प्रणाली लागू नगर्न माग
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको एनिमेटेड प्रोडक्ट इन्फरमेशन भिडियो सार्वजनिक
एनआइसी एशिया लघुवित्तको खुद नाफामा छलाङ, अधिकांश सूचक सकारात्मक
१२ जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर सार्वजनिक, नेशनल लाइफको सबैभन्दा उत्कृष्ट
प्राइम कमर्सिलय बैंकको संस्थापक शेयर बिक्रीमा